माडीमा स्थानिय निर्बाचन र एमालेको तयारी तथा योजनाका बारेमा श्याम बिस्ट संग को कुराकानी | Hamro Madi
माडीमा स्थानिय निर्बाचन र एमालेको तयारी तथा योजनाका बारेमा श्याम बिस्ट संग को कुराकानी
प्रकाशित मिति: ३० चैत, २०७३
माडी नगरपालिकामा चुनाबको चटारो बढिराखेको छ । यसै बिचमा माडीका दलहरुको तयारी र तिनीहरुको आगामी रणनीति र माडी को बिकासका योजना आदिका बारेमा बुझ्ने क्रममा नेकपा एमाले पूर्व क्षेत्रीय कमिटी अध्यक्ष्य तथा जिल्ला संगठन बिभागको सदस्य श्याम बिस्टसंगको नारायण दुबेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप (पुरा अन्तर्वार्ताका लागि आडियो सुन्नुहोस् ):
अहिले स्थानिय तहको निर्वाचनको माहोल बनिराखेको छ । यहाँले र एमालेको तर्फबाट कसरी लिईराख्नु भएको छ ?
विशेष गरेर स्थानिय निकायको निर्वाचन जुन १८–२० वर्ष पछि हुदैँ छ यो हरेक ५–५ वर्षमा गुर्जेर जानुुपर्ने कुराहरु यति लामो समय सम्म जुन थिग्र्रेको छ र यो तहको चुनाव आफैमा एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । एकातिर संविधानको कार्यन्वयनको हिसावले यो महत्वपूर्ण छ भने अर्को तिर स्थानिय तहमा आÇना जनप्रतिनिधीहरु मार्फत आÇनो ठाँउको र आÇनो समेत विकासलाई अगाडि लैजाने यो जुन सुअवसर आएको छ । यी कारणले अहिलेको स्थानिय निर्वाचन ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
यो स्थानिय निर्वाचन स्थानिय निकाएको विकाससँग प्रत्यक्ष्य सँग जोडिन्छ । विशेष गरि यो विकास को द्धारा हुन सक्छ भनि व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने कि राजनितिक दल हेरेर जाने संसदिय चुनावमा जस्तै गरि जाने ? यहाँको कस्तो धाराण छ ?
यो मैले हेर्दा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको जुन मर्म हो एउटा व्यक्तिले हेर्दा केही गर्न सक्दैन । त्यो व्यक्ति जतिसुकै ठूलो वा शक्तिशालि हरेक हिसावले जे सुकै होस । त्यसको लागि संगठन नै चाहिन्छ । त्यस कारणले गर्दा खेरी संगठन विना एउटा व्यक्तिले केही गर्ने व्यावस्था रहदैन । त्यस कारणले गर्दा यो स्थानिय तहको निर्वाचन जुन छ यसमा जनताले योग्य पार्टी, राम्रो पार्टी र त्यो भित्रको राम्रो व्यक्ति हेरिनु पर्छ । व्यक्ति पनि आफैमा महत्वपूर्ण छ तर संगठन विना त्यो व्यक्तिले केही पनि गर्न नसक्ने भएको हुनाले पार्टी पनि शसक्त र असल र व्यक्ति पनि त्यत्तिकै शसक्त र असल भयो भने मात्रै यो निर्वाचनको उद्देश्य पुरा हुन सक्छ । जनताहरुको आशा अपेक्षा पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यहि तपाईले जोडेको सन्दर्भमा एमालेलाई तपाइले कसरी चिनाउनु हुन्छ ?
म नेकपा एमालेलाई यो मुलकको गत निर्वाचको हिसावको पोजिसनले दोस्रो र मुद्दाहरुको हिसावले पहिलो नम्वरको पार्टी हो र नेकपा एमालेको मुद्दा र यसले उठाको विचारहरु र सिदान्तहरुको वरिपरि नै मुलुक चलिराखेको छ भन्ने सबैलाई जगजाहेर छ । त्यसैले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन आवश्यक छ । एमाले सत्ताको वागडोर समालेको बेलामा मात्रै जादा मात्रै जनताले सरकार आप्mनो भएको महसुस गरेका छन । चाहे त्यो वृद्धवृद्धा होस या एकल महिलाको कुरा होस चाहे स्थानिय तहमा जाने विकास बजेटको कुरा गर्नुहोस, चाहे राट्रियताको कुरामा र छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय अडानको विषयमा कतै नझुकी काम गर्ने कुरा गर्नुहोस । यस हिसावले नेकपा एमाले मात्रै अहिलेको सन्दर्भमा जनताले रोज्नु पर्ने र विजय गराउनु पर्ने पार्टी हो ।
यस कुरालाई माडीमा जनताले कत्तिको बुझिराखेको पाउनु भएको छ ?
जनताले बुभ्mनु हुन्छ । हामी राजनितिक दलहरुले जनतालाई एक हिसावले श्रवश्रेष्ठ मान्छौं । जनता भगवान हुन । जनताले बुझन जरुरी छ । हुन सक्छ हिजो बुझिएन होला । २१ औ शताब्दीका जनताले र अझ माडी बासीका जनताले बुझनु पर्छ । आउदो स्थानिय निर्वाचनको नतिजाले कत्तिको बुझेका छन र सचेत छन भनेर एउटा नमुना देखाउछ भन्ने मैले बुझेको छु । र यहि हिसावले माडी वासी जनतालाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु । तपाईहरुलाई साच्चै सर्वोपरि कसले ठानेको छ, वा जनता केही पनि होइन भन्ने कल्ले ठानेको छ ।
दिर्ध विकासमा लाग्ने समय हो तर केही क्षणिक कुरामा लाग्ने सक्ने देखिन्छ । यो चुनावको सन्दर्भमा यहाँले त्यस्ता के खतरा देख्नु भएको छ ?
ज्यादै महत्वपूण कुरा उठान गर्नु भएको छ । जनतालाई केही होइनन् भन्ने ठान्ने जनताले केही बुझदैनन् भन्ने ठान्ने, जनताई भेडाबाख्रा ठान्नेहरुले सानो भन्ना सानो कुरामा लोभमा पार्न सकिन्छ र केही दलमा तथा व्याक्ति वादी सोच भएका मान्छेहरु हाम्रो समाजमा यत्र तत्र हिडिरहेको हामीले तेस्ता प्रकारका व्यक्तिवादिहरु देखिराखेका छौं । र हामीले आम जनतालाई अपिल गरि रखेका छौं यो एक छिनको लोभ, एकै छिनको विकासे नारामा, एक छिनको भुलभुलैयामा जनता लाग्न हुदैन । त्यस्तो हुदाँ आप्mनो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने जस्तो परिस्थिति हो र त्यस्तो परिस्थिति आउन दिनुहुदैन । यस्तो नहोस भनेर एमाले ले छलफल सहकार्य गरि राखेको पनि छ ।
माडीको चुनावी माहोललाई एमालेले कसरी अगाडी बढाइराखेको छ ?
चुनावलाई प्रभावकारी बनाउन भेलाहरु, बैठकहरु जस्ता कामहरु गरि राखेका छौं । यस अन्र्तगत निर्वाचन कमिटि, प्रचार प्रसार समिती, आर्थिक समिति गठन गरि सकेका छौं । युवा भेलाबट युवा कमिटि बनाएका छौं । बुथ स्तरमा बुथ कमिटि बनाएका छौं । महिला, सम्पुर्ण जन वर्गियहरुको भेला गरेका छौं । र त्यसबाट निर्वाचन कमिटि, प्रचार प्रसार समिती गठन गरेका छौं । उमेद्दारहरुको नामावली संकलन पनि गरि राखेका छौं र त्यो नामावलीबाट पार्टी केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार जनताको चाहनाको अनुसार एक आपसमा बसेर छलफल गरेर अन्तिम टुगों पुराएर सर्वसम्मत हिसावले छान्न, नेकपा एमाले लाई र माडीको विकास गर्न सक्ने उमेद्दवारलाई छान्न छलफल र गतिविधि बढाई राखेको छ ।
मेयर र उपमेयर मा महिला र पुरुष मध्ये कुन कुन राख्ने भनेर छलफल पनि गरि राख्नु भएको छ?
छैन । त्यहाँ सम्म पुगि सकेका छैनौ । हामी संग पुरुष र महिला बरावरी रुपमा शसक्त हुनुहुन्छ । त्यसैले छलफलको विषयमा नै छ ।
यहाँका जनताले चाहेको उमेद्दवारलाई सवैले सिफारिस हुदाँ माथिल्लो तहबाट विना पुर्वाग्रह विना उहाँ नै छानिनु हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
नेकपा एमाले जनताको भावना अनुसार चल्ने पार्टी हो । तल्लो निकायबाट सिफारिस गरिएको भन्दा अर्को कुनै उमेद्दवार आउदैन भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।
नेकपा एमाले लाई नै भोट दिएर किन जिताउने ?
पहिलो कारण – जनताले एमालेको बहुमतको सरकार हेर्न चाहेका छन । त्यो आकान्छा र चाहना पुरा गर्न यो स्थानिय चुनावमा जित हासिल गर्नुपर्छ ।
दोस्रो कारण – नेकपा एमालेको नेतृत्व बाट मात्र माडीको समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने र समृद्द माडी बनाउने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट धेरै सजिलो र सम्भव हुन्छ ।
तेस्रो कारण – दलिय सहमतिको लागि, आम जनताको मन जितेर काम गर्नका लागि एमालेको जित्नु पर्छ ।
चौथो कारण – नेकपा एमालेको वर्चश्व छ र माडीको बाक्लो उपस्थिती फेरी पनि प्रमाणित गर्न र त्यो बहुमतको कदर गर्न नेकपा एमाले लाई विजय गराउनु पर्छ ।
नेकपा एमालेले माडी नगरपालिकाको नेतृत्व गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यसमा कुनै शंका नै छैन । नेकपा एमाले माडी नगरपलिकाको नेतृत्व गर्न सक्षम छ र गर्छ भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।
माडीमा पहिलो पटक प्रथम अन्र्तराष्ट्रिय माडी बाल दौड
निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने कुरा आयोगले सोचेको छैन : आयुक्त शर्मा